Lapho kuqala ngamalanga wamaholideyi wehlobo , ngamunye wethu uzibophezele olwandle, kholwa kimi, akubona bonke abantu kufana zokungcebeleka ezintsha-fangled angaphandle. Abaningi namanje uthanda ukuphumula endaweni ajwayelekile, cishe ekhaya. Kungani? Izizathu kungaba kakhulu ngendlela kunesidingo.
Ngokwesibonelo, othile uyesaba yini ukuhamba ngendiza ngendiza, bese imoto emgwaqweni isikhathi eside kakhulu, futhi kukhathaza kunjalo, abanye bakhetha okwamanje hhayi sebecela ukumbuyisela abantwana abancane, ukuze singathwesi kudlule inqubo eyinkimbinkimbi yengane acclimatization, futhi kukhona labo nje uthanda njalo ngonyaka buya izindawo zakho ozithandayo kusukela ebuntwaneni.
Incazelo kanye zokungcebeleka Odessa
Odessa - a umuzi omkhulu futhi nakanjani eyingqayizivele, okuyinto ungakwazi noma ukungathandi, kodwa, mhlawumbe, ukwelapha it akanandaba ncamashi engenakwenzeka. Ubuwazi ukuthi lowo muzi has elinye igama? Kumemori iflothi imigqa ngengoma? Ucabanga, pearl kolwandle? Nokho, isimiso, ngokwengxenye uqinisile, nakuba izakhamuzi Odessa ngokuvamile kubizwa ngokuthi idolobha namanje eNingizimu Palmyra! Nasi igama senkondlo.
Leli dolobha ogwini Sea bay, futhi yilokho zaholela ekwakhekeni yendawo eyingqayizivele esipholile sezulu yezwekazi ubusika bakhona abubandi nehlobo elifudumele. Inani elikhulu of izivakashi unyaka wonke ukuza lapha byuvetnyh imithombo eyaziwa futhi odumile udaka zemifula: Kuyal'nitskogo, Sukhoi futhi Hadzibeevsky.
Ngo-Odessa, kanye endaweni ezungezile, nasogwini woLwandle Olumnyama, iqembu balneo-zezulu, balneological futhi udaka zezulu ngasolwandle zokungcebeleka yamanani Ukraine. Ngilusizo ejenti zokwelapha: daka udaka, brine zonke izizalo zemifula emithathu, zokugeza amaminerali, kokubili zasolwandle kanye yokufakelwa ulwandle ukugeza, botryotherapy, emoyeni, futhi yebo ilanga.
Sibhedlela Odessa athandwa kakhulu hhayi kuphela e-Ukraine nakulo ngalé kwemingcele yayo. Basuke esisogwini zokungcebeleka owaziwa ezifana Arcadia, Kuyal'nitskogo, Lermontov, Cold Beam, Fountain elikhulu, Zatoka, Luzanovka, Seaside, Chernomorka, Lebedevka, Sergeevka.
Makalale Odessa: libuyekeza izimo Indawo
Yiqiniso, ukufika kulo muzi ophithizelayo, izivakashi kudingeka indawo yokuhlala. umbono in isizini ukuthi Caledonia nje kuyo izihlahla zenjoloba. It has konke inhliziyo yakho ufisa - amahhotela amakhulu namahhotela nesizotha kakhulu, zokungcebeleka impilo owaziwa futhi ezincane mini-amahhotela, zokuhlala, emizini yabazalwane, Cottages amafulethi.
Ehlobo lika-Odessa eduze lolwandle ifana omkhulu, ngokungazelelwe isiduli esikhulu anda. ENingizimu Palmyra kukhona isisho esithi: Woza kithi izinsuku 2 futhi wena ukuthi uhlale amaviki angu-2.
eziningi kakhulu, kuhloswe for imizwelo eyakhayo futhi okuhlangenwe nakho okuthakazelisayo, uthanda ukuhlala nezihlobo noma abangane.
Rest in Odessa: izibuyekezo zezindawo ukudla
Pearl kolwandle bekulokhu eliyipharadesi gourmets kanye abalandeli ukudla okwehl 'esiphundu. Amathilomu, nemishayo, zokudla, cafeterias, izindawo zokudla okusheshayo ... Ukrainian, isiRashiya, Jewish, isiGeorgia, isiNtaliyane, cuisine Azerbaijani cishe yiluphi uhlobo nganoma isiphi isikhathi ukulungele pamper kokubili izakhamuzi Odessa, kanye nezivakashi eziningi nge izibiliboco enkulu.
Rest in Odessa: izibuyekezo ezikhangayo
Odessa anganikeza ezokungcebeleka bonke bathanda futhi amabhajethi, kokubili ehlelekile futhi abazimele.
Ngokwesibonelo, imidlalo yaseshashalazini-goers ungavakashela abadumile Opera House, okuyinto kanye efakiwe izinkanyezi emhlabeni ezifana Anna Pavlová, Antonina Nezhdanoff Battistini, Dzheraldoni leonid Sobinov NF Rimsky-Korsakov, P. I. Chaykovsky, Pablo Sarasate, C. Rachmaninoff, Solomiya Krushelnitskaya, Titta Ruffo, fedor Shalyapin futhi Ezhen Izai. Singasho kugcwale umlomo ukuthi Odessa Opera House - kuba inhlanganisela izakhiwo obumangalisayo buciko.
Ungase futhi ukuya yaseshashalazini Russian, amahlaya zomculo noma Philharmonic.
Enelukuluku ngenjabulo abheke iminyuziyamu eminingi, ezithakazelisa kakhulu phakathi kwabo abhekwa eNingizimu Palmyra Museum of aseNtshonalanga Kapa kanye naseMpumalanga Art, abavubukuli, kwezobuciko.
Abathandi imisebenzi yangaphandle Yiqiniso, waziwa ngokuba abadumile Odessa amabhishi Arcadia, Injabulo, Langeron, Fontana, Sauvignon futhi Chernomorka. Kufanele kuqashelwe ukuthi zonke lezi zindawo zitholakala kokubili amabhishi ezikhokhelwayo khulula. Neziphathimandla zedolobha bonke bayaziqhenya yokuthi umnyango central ukuzilibazisa endaweni namanje khulula.
Umkhondo impilo abadumile! amakhilomitha eziningana ezimangalisayo, ezokuthutha khulula komgwaqo lapho kungenzeka ukuhamba noma ukugibela phezu kuthathwe ngokushesha ukuqasha ibhayisikili noma roller skates.
Ngakho, esekelwe konke okungenhla, singaphetha ngokuthi lonke e-Odessa Izibuyekezo njalo chaza at zizinhle!
Lake Labynkyr e Yakutia: Izibuyekezo mayelana nokudoba isithombe. Umlando Labynkyr ongaqondakali echibini silo e Yakutia
Warhammer ikhathuni ( "Ultramarines"), 2010
Iphutha 868 868 Iphutha yokuthola i-Windows 7